China Carbon Steel EPDM Rubber Seat Carbon Steel Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ရောင်းချသူများ - Allway Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Butterfly Valve > Lug Type Butterfly Valve
Carbon Steel Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve
ကာဗွန်သံမဏိ lug အမျိုးအစား butterfly valve ၏ပစ္စည်းကို ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် အမျိုးအစားများစွာ၊ ပုံစံအသစ်များ၊ ကောင်းမွန်သောလက်ရာ၊ ကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှု၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး တာရှည်ခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ အဆို့ရှင်များ (စံမဟုတ်သော) ကိုလည်း ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကာဗွန်သံမဏိ lug type butterfly valve ၏ပစ္စည်းသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း နှင့် ခိုင်ခံ့သော သံချေးတက်ခြင်း ၊ ချောမွေ့သော ခလုတ် နှင့် ဆက်တိုက် မြန်ဆန်သော အဖွင့်-အပိတ် ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ အဆို့ရှင်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 80â„ƒ မှ 0â”ƒ အကြားတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးနှင့် ပြီးပြည့်စုံစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အားထုတ်မှုတိုင်းကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်နှင့် နည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းများ၏ အဆင့်တွင် 100% အထိ အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Original China Carbon Steel EPDM Rubber Seat Lug Wafer Type Butterfly Valve, You would not have any communication problem with us. We sincerely welcome customers all over the world to contact us for enterprise cooperation.100% Original China Butterfly Valve, Lug Wafer Type Butterfly Valves , We aretrying our best to make more customers happy and satisfy. တန်းတူညီမျှ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ယခုမှစပြီး အနာဂတ်ကာလအထိ အောင်နိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆထားသော ဤအခွင့်အရေးကို အခြေခံ၍ သင့်လေးစားအပ်သော ကုမ္ပဏီနှင့် ကောင်းမွန်သောရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးသားစွာမျှော်လင့်ပါသည်။
ကာဗွန်သံမဏိ lug အမျိုးအစား လိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျစ်လျစ်သော၊ သေးငယ်သောလည်ပတ်အားကို အသုံးပြုသည်။ လည်ပတ်မှု လျင်မြန်စွာပွင့်လာပြီး အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ အပေါ့စား အထည်အလိပ်၊ စက္ကူနှင့် အခြားရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ၊ စီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိရန်နှင့် မီဒီယာလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
ကာဗွန်သံမဏိ lug type butterfly valve ၏ကိုယ်ထည်ပစ္စည်းသည် ကာဗွန်သံမဏိဖြစ်သင့်ပြီး၊ disc သည် သံ၊ သံမဏိ၊ ကြေး၊ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုင်ခုံသည် EPDM၊ NBR၊ VITON၊ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ကိုင်လီဗာ၊ worm gear သို့မဟုတ် actuator များဖြင့် လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်သည်။
ကာဗွန်သံမဏိ lug အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်တွင် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သော နည်းပညာ၊ ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ ပါ၀င်ပြီး ISO9001 နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးစနစ် လက်မှတ်ကို ကျော်ဖြတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကာဗွန်သံမဏိ lug အမျိုးအစားလိပ်ပြာအဆို့ရှင် အများအပြားရှိသောကြောင့် ပေးပို့ချိန်တိုတောင်းပါမည်။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတဆင့် သင်္ဘောဖြင့် သွားလာနိုင်သည်။ ရထား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အခြားအရာများ။ အာမခံကာလ 12-18 လဖြစ်သင့်သည်။
hot Tags:: ကာဗွန်သံမဏိ Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများ၊ လက်ကားဝယ်ယူ၊ စက်ရုံ၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနှုန်းချိုသာသော၊ ဈေးနှုန်းစာရင်း၊ ကိုးကားချက်
Iron Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve
Lug Type Butterfly Valve PTFE ထိုင်ခုံ
Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve သည် Electric Actuator ပါရှိသည်။
Pneumatic Actuator ဖြင့် Lug Butterfly Valve